राशि चक्रको बदलावले केही राशिलाई मिल्दैछ यस्तो लाभ र नोक्सानी - MassiveKhabar
आर्थिक मामलाको हिसाबमा महत्वपुर्ण मानिने राशिचक्र फेरिएको छ।यस अवधिमा केहि राशिका जातकलाई आर्थिक लाभको अवसर जुर्नेछ भने केहिले नोक्सान बेहोर्नु पर्नेछ । तसर्थ यस अवधिमा कुन राशिका लागी कस्तो रहन्छ आर्थिक अवस्था त्यस बारे जान्नु उपयुक्त हुन्छ ।
मेष राशि=मेष राशिका जातकका लागी राशिचक्रले नकारात्मक असर पार्नेछ । यस अवसरमा धार्मिक बिषयमा निकै ठुलो खर्च हुने योग छ । केहि स्वास्थ्य र यात्रामा पनि खर्च हुने संभावना रहन्छ । तर यतिका खर्चका बावजुद घाटामा भने रहनु पर्दैन ।वृष राशि=वृष राशिका लागी यस पटकको राशिचक्र आर्थिक स्थितिमा राम्रो संभावना बोकेर आएको छ । भविष्य बनाउन, ब्यापार गर्न वा सफता पाउन यो उत्तम समय रहेको छ । यदि यस अघि नै कुनै कारोबार थाल्नु भएको छ भने त्यसैलाई प्राथमिकता दिनु लाभदायि हुन्छ ।
मिथुन राशि=यस राशिचक्रमा मिथुन राशिका जातकका लागी मेहनत अनुसारको आर्थिक लाभ मिल्ने योग छ । शुरुवातमा खर्च बढे पनि आर्थिक स्थितिमा संकट भने आउदैन । साथै यो विस्तारै सुधार हुदै जान्छ । लगानीकर्ताका लागी फाल्गुणको दोश्रो साता उत्तम रहने छ ।कर्कट राशि=कर्कट राशिका जातकका लागी राशिचक्रले शुरुवातमा नै आर्थिक सबलता बनाउने छ । यो पुरा अवधिमा कुनै न कुनै माध्यमबाट धन प्राप्त भइरहन्छ । तर फाल्गुणको दोश्रो साताबाट भने अवस्था केहि कमजोर बनेर जानेछ । धन हराउन सक्छ ।
सिंह राशि=सिंह राशिका जातकलाई राशि चक्रमा महिला साझेदार राखेर आर्थिक कारोबार गर्ने उत्तम देखिन्छ । ब्यापारमा हुने घाटा पनि महिलाका कारण सुधार भएर जानेछ । तर भुलेर पनि यस अवधिमा बैंकबाट कर्जा भने नलिनु होला, यो घातक साबित हुनसक्छ ।कन्या राशि=कन्या राशिका जातकलाई यस राशिचक्रले आर्थिक स्थितिमा मजबूत बनाएर राख्नेछ । तथापी स्थिति सधै तपाईको पक्षमा भने हुदैन । सूर्य छैठौ भावमा जाने भएकाले पनि पुरानो कर्जा वा उधारो तिर्न सकिने छ । तर नयाँ बचत भने हुनसक्दैन ।
तुला राशि=तुला राशिका जातकका लागी राशिचक्रले खर्च बढाउने योग छ । आर्थिक स्थितिमा सुधार हुदैन बरु जोहो रकम सकिने योग छ । तर फाल्गुणको दोश्रो सातामा सम्पती खरीद गर्ने संभावना बन्नेछ । माघ महिनामा कुनै ठुलो कारोबार नगर्नु उत्तम हुन्छ ।वृश्चिक राशि=वृश्चिक राशिका ब्यक्तिका लागी राशिचक्रले सरकारी क्षेत्रबाट आर्थिक लाभ गराउने योग छ । यस अवधिमा यि राशिका जातकले अत्यधिक लाभ प्राप्त गर्नेछन् । साथै हरेक क्षेत्रमा लगानी गर्नु उपयुक्त रहेको छ । यो समय तपाईको हो भन्दा फरक पर्दैन ।
धनु राशि=धनु राशिका ब्यक्तिका लागी राशिचक्रको अवधिमा आर्थिक सुधार हुनेछ । यस अवधिमा पारिवारिक सम्पति प्राप्त गर्न र पैतृक सम्पतिको भागिदार बन्ने योग छ । तर फाल्गुणको दोश्रो साताबाट यो समय अनुकुल भने हुदैन ।मकर राशि=बुध र शुक्रको युति मकर राशिको दोश्रो भावमा हुने भएकाले आर्थिक मामलामा निकै राम्रो परिणाम दिनेछ । अझ भनौ यस अवधिको शुरुवातमा नै राम्रो आम्दानी प्राप्त हुनेछ । तर खर्च गर्दा भने अवस्था र कारण अनुसार मात्र गर्नुहोला ।
कुम्भ राशि=कुम्भ राशिका जातकका लागी यस अवधिमा अधिक खर्च हुने योग छ । स्वास्थ्य समस्याका धन खर्च बढ्नेछ । साथै केतुको उपस्थितिले धन लाभको मौका गुम्नेछ । तर्सथ आर्थिक बिषयमा सजग रहनु निकै महत्वपुर्ण रहेको छ ।मीन राशि=मीन राशिका जातकलाई आर्थिक स्थितिमा उतारचढाव आएपनि धन लाभ हुनेछ । तर मंगल, दशम भावमा प्रवेश गर्नासाथ धनको कमी महसूस हुनेछ । तसर्थ एक सुचि बनाएर कुनै पनि शिर्षकमा सोहि अनुसार खर्च गर्नु उपयोगी हुनेछ ।
यो पनि :शिवजीले सबैभन्दा बढि मन पराउने वस्तुहरू भनेको गाँजा, भाङ्ग, धतुरो, बरफजस्तो चिसो गाईको दूध, श्रीखण्ड र खरानी हुन्। त्यसैले यी कुराहरू चढाउँदा, शिवजी अत्यन्त खुसी हुनुहुन्छ ।तथापी शिवपुराणका अनुसार, भक्तालुहरूले शिवजीको पुजा आरधना गर्दा यी ५ वस्तुहरू कहिल्यै पनि चढाउनुहुँदैन, यदि चढाएमा अनर्थ हुनेछः१. गोलाईँती फूल (केतकी फूल)एकदिन, विष्णु भगवान र ब्रह्मादेवको बीचमा ‘को बलियो’ भन्ने विषयमा घमासान युद्ध भइरहेको थियो। अनि जब उनीहरूले एकदमै खतरनाक अस्त्र प्रयोग गर्न लागे, तब उनीहरूको बीचमा ज्योतिर्लिङ्ग बनेर शिवजी प्रस्थान गर्नुभयो। त्यसपछि शिवजीले विष्णु र ब्रह्मालाई ज्योतिर्लिङ्गको फेद र टुप्पो पत्ता लगाउन आदेश दिनुभयो।
दुवैजना फर्किए र विष्णुले हार स्वीकारे। तर ब्रह्माले ज्योतिर्लिङ्गको टुप्पो फेला पारेको भनी ढाँटे। गोलाईँती फूल पनि ब्रह्माकै कुरामा सहमत जनाउँदै शिवलाई ब्रह्माले टुप्पा फेला पारेको कुरामा हो हो मिलायो।तर, ब्रह्माले ढाँटेको भनेर शिवजीले थाहा पाइहाल्नुभयो, किनभने उक्त ज्योतिर्लिङ्ग अनन्तसम्म फैलिएको थियो।ब्रह्मा र गोलाईँती फूलको त्यो झूटबाट क्रोधित शिवजीले ब्रह्माको एउटा टाउको काटिदिनुभयो र कसैले पनि उनलाई भगवान भनेर पुजा नगरून् भनेर ब्रह्मादेवलाई श्राप दिनुभयो। त्यसपछि, शिवजीले गोलाईँती फूलतर्फ फर्केर उनको पुजा गर्दा कहिल्यै पनि सो फूल प्रयोग गर्न नपाऊन् भनेर श्राप दिनुभयो।
२. तुलसीशिवपुराणमा उल्लेख गरिएअनुसार, दैत्य जालन्धरको वध गर्न एकदमै कठीन थियो, किनभने उनकी पत्नीको पतिव्रत शक्तिले उनलाई कुनै पनि देवताले हराउन नसक्ने शक्ति दिएको थियो। तर विष्णु भगवान एकदमै चलाख१ जालन्धर र महादेवको युद्ध भैरहेको बेला विष्णु भगवानले जान्धरको रूप धारण गरी उनकी पत्नी ‘तुलसी’को पतिव्रत शक्ति लुट्न गए। जालन्धररूपी विष्णुले तुलसीको पतिव्रतलाई लुट्नेबित्तीकै महादेवले जालन्धरलाई भष्म बनाइदिएका थिए।आफ्नो पतिको मृत्यु र आफूप्रतिको धोकाबाट क्रोधित तुलसीले महादेवलाई आफ्नो पवित्र पातले कहिल्यै पनि पुजा गर्न नपरोस् भनेर श्राप दिन्छिन्। त्यसैले गर्दा नै शिवजीलाई तुलसीको पात चढाउनुहुँदैन भनेर शिवपुराणमा उल्लेख गरिएको छ।
३. नरीवलको पानीशिवजीलाई चढाउन नहुने पवित्र वस्तुहरूमध्ये नरीवलको पानी पनि एक हो। शिवजीलाई सिङ्गो नरीवल चढाउनु कुनै भूल हुँदैन, तर शिवलिङगमा कहिल्यै पनि नरीवल फुटाएर पानी नचढाउनुहोला। शिवपुराणमा, यस्तो गरेमा शिवजी रिसाउने र अनिष्ट हुने जनाएको छ।
४. बेसार:बेसारलाई स्त्रीहरूको सुन्दरता बढाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। त्यही कारणले गर्दा नै शिवजीलाई बेसार चढाउन नहुने शिवपुराणमा उल्लेख गरिएको छ।५. सिन्दूर:विवाहित महिलाहरूको लागि सिन्दूर एकदमै महत्वपूर्ण र पवित्र मानिने गरिन्छ। आफ्नो पतिको लामो आयुको लागि हिन्दु महिलाहरूले सिउँदोमा सिन्दूर लगाउने गर्दछन्। तर, शवजी त्रीमूर्तीदेवहरू मध्ये संहारकर्ता हुन्। त्यसैले नै शिवजीलाई सिन्दूर प्रयोग गरेर पुजा गर्नु ठूलो भूल हुन जान्छ। यस्तो शिवपुराणमा उल्लेख गरिएको छ।